Ajanbi ku ahaanshaha Espoo - InfoFinland
Magaalooyin > Espoo > Nolosha Espoo > Ajanbi ku ahaanshaha Espoo
Qorshaha la qabsashada iyo sahminta hore
Goobaha daneysashada waxaad ka heleysaa macluumaadyada adeegyada magaalada. Goobaha daneysashadu waxay magaalada uga yaalaan goobo badan. Macluumaadka xiriirka rasmiga ah ee goobahaas waxay ku jiraan bogga shabakadda magaalada Espoo.
Nambarka telefoonka ee ka dhexeeya goobaha daneysashadu waa: (09) 816 57070 iyo emailka info(at)espoo.fi.
Goobta deganaayasha Kivenkolo waxaa ku yaalla qol fadhi ah oo dadkoo dhan u furan , halkaasoo aad ka heli karto la talain iyo hagis lagu bixinayo luqado kala duwan. Kivenkolo waxaa ay ku taallaa Espoon lahti.
Goobta billowga ee dhallinyarada qaangaarka ah
Goobaha billowga ee Guriga hagitaanka waxaa hagitaan iyo talo aan ballan loo qabsaneyn loogu fidiyaa dhallinyarada 30 jirka kayar.
Goobta billowga ee Leppävaara
Is Goobta billowga ee Iso Omena
Lambarka adeegga ee Guriga hagitaanka: 040 126 7513
Goobta kulanka ee caalamiga ah ee Trapesa waxey fidisaa adeeg latalineed. Horay waqti uga qabso. Ururku wuxuu sidoo kale leeyahay qol fadhi ah iska furan, koox ku sheekeysta luqada finnishka iyo dhacdooyin kala duduwna.
Goobta kulanka ee caalamiga ahFinnish
Qaxootigu wuxuu sidoo kale la xiriiri karaa adeegyada dadka dalka u soo guuray (Maahanmuutajapalvelu) iyo waaxaha arimaha bulshada (sooshaalka) dadka waaweyn ee magaalada Espoo. Adeegga la-talinta waxaa ka heleysaa talo iyo hagis ballan la’aan. La-talinta waxaa lagu bixiyaa luqado badan.
Adeegyada dadka dalka u soo guurayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Adeegga waxaa qeyb ka ah Helsinki-info, Xafiiska diiwaangelinta Uusimaa, Maamulka canshuurta iyo adeegga In To Finland ee Kelada, Xafiiska shaqada ee Uusimaa, Xarunta ammaanka hawlgabka iyo Rugta Ganacisga soonaha Helsinki.
Xafiiska diiwaangelinta Uusimaa
﻿Qorshaha la qabsashada iyo sahminta hore
Sahan-horaadka waxaa lagu sameeyaa adeegyada dadka dalka u soo guuray ee Espoo, ama waaxda arimaha bulshada ee dadka waaweyn.
Adeegyada dadka dalka u soo guuray waxay sidoo kale dadka dalka u soo guuray ku caawiyaan arrimo kale oo la xiriira nolosha Finland.
Shaqaalaha xafiiska shaqada iyo shaqaaleynta ayaa kula sameynaya qiimeyn lagu qiimeynayo heerkaaga aqoomeed iyo qorsheynta la-qabsashada, markaad iska diiwaangeliso inaad tahay shaqo doone . Xafiiska Espoo wuxuu ku yaal Leppävaara.
Macluumaadka xiriirka shaqada sooshaalka ee dadka waaweynFinnish | Iswidish | Ingiriis
Xafiiska shaqada ee Espoo
Xafiisyada shaqada ee UusimaaFinnish | Iswidish
Warar dheeraad ah ka sii aqri: La-qabsashada Finland
Haddii aadan aqoonin Finnish ama Iswiidish waxaad isticmaali kartaa turjubaan marka aad ka daneysaneyso shaqaalaha dowlada. Cida markaa kuu qababan qaabineysa turjubaanka waa shaqaalaha dowlada. Markaa turjubaanku waa kuu lacag la'aan.
Sarkaal waxaa loola jeedaa tusaale ahaan booliska, kelada, Xafiiska shaqada ama sarkaalka magaalada Espoo.
Si kastoo ay ahaataba sarkaalku mar walba ma bixinayo turjubaanka. Horay u sii weydii in sarkaalku bixinayo qarashka adeegga turjubaanka.
Waad adeegsan kartaa turjubaan markaad doonto, haddaad adigu dalbaneyso iskana bixineyso kharshka.
Haddii sarkaalku uusan kaa bixineyn turjubaanka, iskaa ayaad u dalban kartaa. Markaasna waa in aad adigu iska bixisaa.
Waxaad si hubaal ah u weydiin kartaa deegyada turjubaanada adeegyada dadka dalka u soo guuray ee magaalada Espoo.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Turjubaan ma u baahan tahay?
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 22.06.2017 Boggan war-celin ka soo dir